Semalt: WebSundew Web Scraping Software. Ny fepetra sy ny fepetra momba ny rafitra manandanja
Ny famafazana tranonkala dia manangona angona avy amin'ny tranokala ary manodina azy araka ny filazan'ny mpampiasa. Mivoatra hatrany ity sehatra ity, ary izany no mahatonga ireo karazana rindrambaiko vaovao hipoitra. Ny fanasitranana ny tranonkala dia lasa fomba mahomby sy mora indrindra hahazoana fampahalalana mahasoa avy amin'ny tranonkala samihafa. WebSundew dia fitaovana mahery vaika amin'ny alàlan'ny tranonkala izay manampy amin'ny famongorana ireo angona amin'ny haavon'ny haavony sy ny vokatra. Amin'ny WebSundew, azonao mora ny manangona betsaka ny angon-drakitra ary manova azy ho endrika tsara.
WebSundew - Mety ho an'ny orinasa sy orinasa:
WebSundew dia mety amin'ny orinasa (ecommerce, mpivarotra an-tserasera, sampan-draharaham-panjakana, sampan-draharaha). Azonao atao ny mikaroka mora foana ny angona angon-drakitra, manangom-bokatra ary manangona izany ao amin'ny JSON na CSV format. WebSundew dia tonga amin'ny fiteny efatra samihafa: Lite, Professional, Enterprise, ary Standard.
Afaka misafidy ny dikan-teny mifanaraka amin'ny zavatra takinao sy ny andrandrainao. Ohatra, ny versione Lite dia mety ho an'ny startups sy freelancers, ary ny Professional version dia tsara ho an'ny orinasa lehibe. Ny ampahany tsara indrindra dia ny WebSundew dia hametraka ny angona ilaina ao amin'ny rakitra Excel ary hanaparitaka sary roa sy antontan-taratasy.
WebSundew - Fanompoana mahatalanjona sy mahagaga:
Raha toa ianao ka mahatsapa ny vokatra avo indrindra amin'ny asa ary mahafantatra ny fandoavana ny vola dia tsy afaka manao na inona na inona ianao raha tsy misy WebSundew. Asa goavana sy mahafa-po tokoa izany, izay mamoaka sy mametaka ny angon-drakitra ary manoratra izany araka ny fangatahanao. Azonao atao ny manakona ny fampahalalana avy amin'ny tranonkala dynamique sy fototra, nefa tsy mampandefitra ny kalitao.
Mba hanombanana ny fahombiazany dia mila maka sy mametraka WebSundew ianao. Amin'ity mpangataka , azonao atao ny mamaritra ny famaritana meta, ny anaram-bosotra, ary ny teny fanalahidin'ny tranonkala eo amin'ny mason'ny maso.
Ny WebSundew dia mitantana ny votoaty rehetra tsy misy rakitra:
WebSundew no hany fitaovana ahafahana manokatra tranonkala tsy misy rakitra. Ity fitaovana ity dia tsara ho an'ireo tsy mpandrindra sy tsy mpandrindra, ary tsy mila manana fahaizana manokana momba ny programa ianao mba hahazoana tombony amin'izany. Fa kosa, ny WebSundew dia mitari-dàlana anao amin'ny alalan'ny famoronana modely tsy misy fehezan-danjam-panafatra ary mamoaka rakitra HTML mora. Ny valiny dia voavonjy ao amin'ny format CSV, XML ary spreadsheet. Ny orinasa toy ny sampan-draharaha ara-bola sy ny banky, sampan-draharaham-barotra sy ny fampindramam-bola dia afaka mandray soa avy amin'ity fitaovana .
Ho toy ny mpampiasa WebSundew dia tokony hanana rafitra manaraka ireto ianao:
1. Fehezin'ny rafitra fampandehanana: Windows 7 / Vista / XP / 2000
2. RAM: 512 MB
3. Processor (CPU): Athlon 1000 MHz na Pentium III
WebSundew interface interface:
WebSundew dia fantatry ny mpampiasa azy akaiky kokoa interface izay manampy anao maka sary sarimihetsika ho anao rafitra. Azonao atao ny manova mora ny Web 2. Tranonkala 0 ary mamoaka vaovao avy amin'ny loharano HTML ao an-toerana. Raiso ny dikanteny maimaim-poana ary andramo ny WebSundew mandritra ny 15 andro mba hahazoana toky ny kalitaony. Rehefa tapitra ny vanim-potoana fitsapana, dia tsy ho azo atao ny mampiasa WebSundew, ka tsy maintsy mividy ny dikan-teny voalohany. Azonao atao ny manakatona pejy 100 miaraka amin'ny andrana fizarana azy, avy eo ny rindrambaiko dia manohy miasa ary mitaky anao handoavana zavatra $ 20 hatramin'ny $ 70. Raha fintinina, ny WebSundew dia fitaovana manokana sy mpikaroka amin'ny Internet Source .